Saraakiil ka Socotay Maxkamadda Dowladda Somalia oo Baydhabo tagay – Radio Daljir
Diseembar 27, 2015 7:19 b 0
Axad, December 27, 2015 (Daljir) —Gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada Qalabka sida oo ay wehliyaan saraakiil ka tirsan ciidanka XDS ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
G/le Dhexe Xasan Cali Nuur Shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda Darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa Warbaahinta u sheegay in ujeedada ay maanta u tageen Beledweyne ay tahay baaritaan ay ku sameeynayaan waxa ka jira wararka sheegaya in askar ka tirsan ciidanka qalabka sida ay ku lug laheen dagaal beeleedyo ka dhacay magaalada Beledweyne.
Gudoomiyaha ayaa xusay in ay safarkiisa ku wehliyaan saraakiil sar sare oo ka tirsan ciidanka XDS iyo xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida, isagoo tilmaamay iney halkaasi ka bilaabayaan baaritaan buuxa oo la xiriira haddii ay jiraan shaqsiyaad ka tirsan ciidamada oo ka qeyb qaatay dagaal beeleedyadii ka dhacay Beledweyne.
“Maxkamadda ciidamada qalabka sida waxeey balan qaadeeysaa ciddii ay ku caddaato arintaasi iney talaab cad ka qaadi doonto sida hore looga bartayba” ayuu yiri gudoomiyaha maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida G/le dhexe Xasan Cali Nuur Shuute.
Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Arinta labaad ee muhiimka ah iyadana waxaa waaye waxaa bishaan gudaheeda laba mar xabsiga Beledweyne ka dhacday in maxaabiis ku jirtay xabsiga ay baxsato, arintaasi waxaad ogtihiin in loo xiray taliyihii xabsiga Beledweyne iyo taliyihii qeybta guud ee gobolka Hiiraan u qaabilsanaa ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, arinta labaad ee uu yimid wafdigu waa xaqiijinta sababta rasniga ah ee ay u baxsadeen Maxaabiista”.